‘पत्रकार पुरुषोत्तम ढकालको टेलिभिजन ‘शो’ अमेरिकन जर्निको अर्को नयाँ सृंखलामा शिक्षाविद डा. जित जोशी’ - Enepalese.com
वासिङटन डिसी 13:02
‘पत्रकार पुरुषोत्तम ढकालको टेलिभिजन ‘शो’ अमेरिकन जर्निको अर्को नयाँ सृंखलामा शिक्षाविद डा. जित जोशी’
इनेप्लिज २०७२ साउन ३१ गते ९:४९ मा प्रकाशित
पत्रकार पुरुषोत्तम ढकालको टेलिभिजन ‘शो’ अमेरिकन जर्निको अर्को नयाँ सृंखलामा शिक्षाविद डा. जित जोशी’
:: नेपाली अमेरिकनको सामाजिकीकरणको दिशाबोध गर्ने सार्थक प्रयास पुरुषोत्तम ढकालको टेलिभिजन ‘शो’ अमेरिकन जर्निको नयाँ सृंखलामा शिक्षाविद डा. जित जोशी भन्छन, ‘संगठित आवाजले अमेरिकामा नेपालीको पहिचान बन्छ तर मूल थलोको राजनीति र जातिय बिभाजनले रोक्यो नेपाली अमेरिकनको सामाजिकीकरणको यात्रा ।’
:: क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीका डिन डा. जित जोशीसंग नेपालको केन्द्रिकृत शिक्षा प्रणालीले ल्याएको विकृति र नेपाली अमेरिकनको समाजिकिरणमा मुलथलोको राजनीतिले पारेको असर र प्रभावबारे विचारोत्तेजक बहस ।